तनहुँ मुख्य मन्त्री कप भलिबल प्रतियोगिताको च्याम्पियन - Tanahun Khabar
दमौली । गण्डकी प्रदेशस्तरीय भलिबल प्रतियोगिताको फाइनलमा तनहुँका पुरुष टिम उपाधि बिजेता तथा महिला टिम तेश्रो हुन सफल भएको खुशीयालीमा आइतबार दमौलीमा पञ्चेबाजाका साथमा बिजेता खेलाडीले ¥याली तथा नृत्य प्रस्तुत गरेका छन् । कास्की जिल्ला भलिबल संघको आयोजनामा पोखरा रंगशालामा भएको फाइनल प्रतिस्पर्धामा तनहुँले स्याङजाको टिममाथि जित हासिल गरेको थियो ।
भलिबल खेलमा तनहुँले फड्को मारेको खुशीयालीमा बाजागाजा सहित उनीहरुले पाएका पुरस्कार प्रर्दशन सहित नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए । बेस्ट अफ फाईभमा सञ्चालित प्रतियोगितामा ३–२ को सेटले स्याङजाको टिममाथि तनहुँले जित प्राप्त गरेपछि रु.दुई लाख रुपैयाँ पुरस्कार जित्न सफल भएको छ ।
दश मिनेट अघि मात्रै खेलाडीले ट्रयाक सुट पाएको भलिबल संघ तनहुँका अध्यक्ष पदम सुनारले बताए । महिला खेलाडीले तेश्रो स्थान चुमेपछि हौसला मिल्यो । सुनारले भने ‘तनहुँ बाहेक सबै जिल्लाका खेलाडी डे«समा थिए ।’ हामीलाई हिन्नताबोध भैरहेको थियो तर हरेश खाएनौ,त्यसैको प्रतिफल बिजेता हुन सफल भइयो उनले भन्नुभयो ।
जिल्लाका विभिन्न संघसंस्थासंग आर्थिक सहयोग मागेपनि कतैबाट सहयोग नमिल्दा दुख लागेको बताए । खेलकूद राष्ट्रको गहना भएकोले यसको उचित संरक्षण सम्र्बद्धनमा सबै क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्ने सुनारको भनाई रहेको छ ।
खेलाडीलाई क–कसले सहयोग गरे ?
गोरखाली मोटरर्स प्रालि दमौलीका संञ्चालक रनिल रोकाले महिला खेलाडीलाई बाह्र सेट जर्सी सहयोग गरेका थिए । त्यसैगरी पुरुषतर्फको लागि जिल्लाको शुक्लागण्डकी–६ स्थित श्री ओम सुलभ हाडवेयर एड सप्लार्यसले बाह्र सेट जर्सी उपलव्ध गराएको अतुलनीय सहयोग गरेको बताए ।
भलिबल संघ तनहुँका संघका अध्यक्ष पदम सुनार र सचिव अशोक गिरीको सक्रियतामा खेलाडी टिमलाई खर्च जुटाएका थिए । यसैगरी तनहुँ र कास्कीबीच भएको सेमिफाईनलमा कास्कीविरुद्ध ३–१ को सेटले तनहुँको छात्रातर्फको टिम विजयी भएर तेश्रो हुन सफल भएको थियो । तेस्रो बनेको तनहुँले ५० हजार रुपैया पुरस्कारको साथमा ट्रफी तथा प्रमाणपत्र पाएको थियो ।
उत्कृष्ट खेलाडी छनोटमा को–को परे ?
प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ तनहुँका खेलाडी मिलन चन्द ठकुरी सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए । बेस्ट स्पाईकर अशोक श्रेष्ठ, बेस्ट सेटर विवश आले घोषित भएका थिए ।
प्रतियोगिताको छात्रातर्फको प्रतिस्पर्धामा बेस्ट स्पाईकर भलिबलतर्फकी राष्ट्रिय खेलाडि उषा भण्डारी र बेस्ट सेटर सत्यवती माविकी छात्रा अर्पणा खाँड ठकुरी प्राप्त गरेका छन् ।
राष्ट्रिय खेलाडी लक्ष्मी कुमाल लगायतका खेलाडीका कारण बिजयी हासिल गर्न सफलता मिलेको जिल्ला भलिबल संघ तनहुँले जनाएको छ । खेलकूद विकास समितिले सानो रकम पनि सहयोग नगरेको गुनासो भलिबल संघ तनहुँका सचिव अशोक गिरीको रहेको छ ।
धुलो खाँदै जानुपर्छ अस्पताल
स्व.बुबाको स्मृतिमा पत्रकारिता पुरस्कार स्थापना